Faran’ny herinandro : nisesy ny haintrano, entana antapitrisany lasa lavenona (NewsMada) | AEMW
Faran’ny herinandro : nisesy ny haintrano, entana antapitrisany lasa lavenona (NewsMada)
Trano iray etsy Ambodifilao no kilan’ny afo, ny asabotsy tamin’ny 5 ora hariva sy 30 mn. Araka ny fanazavana voaray, gazy tsy nihidy tsara no nandoro ny ridao ka nampiitatra ny afo ary nitarika ny firehetan’ny trano. May ny ambany rihana sy ny rihana voalohany tamin’ilay trano. Ireo olona teo amin’ny manodidina no nahita ny setroka nivoaka tamin’ilay trano ka niezaka niantso ireo olona niharam-boina tao an-trano. Fotoana fohy taorian’ny firehetana namono ny afo ny mpamonjy voina. Nalaky voafehy ny afo ary tsy nisy ny aina nafoy. Mitentina 30 tapitrisa Ar kosa ny tentimbin’ny entana levon’ny afo, araka ny fanazavan’ny mpanao fanadihadiana.
Fa trano lehibe roa koa ravan’ny afo teny Andoharanofotsy, ny asabotsy tolakandro teo ihany koa. Nahataitra ny olona teny an-toerana ny afo efa nijoalajoala . Tsy fantatra anefa izay nahatonga ny firehetana. Tonga namono ny afo ny mpamonjy voina.
Trano miisa 129 indray kilan’ny afo tao Ambodinonoka Antanambao Manampotsy, ny asabotsy tolakandro ihany. Tsy fitandremana tamin’ny afo avy nahandroana sakafo tao amin’ny trano iray no niantombohan’ny afo ka niitatra tamin’ireo trano manodidina. Miisa 439 ireo traboina.
← Halatra avolenta : 500 tapitrisa Ar ny iray kilaon’ny lakolosy, 2 hetsy Ar ny baiboly (NewsMada)
Minisitra Atallah Béatrice : “Mikatsaka ny fahamarinan-toerana politika ny Sadc” (NewsMada) →